Peter's Indawo yokuhlala eCape Bridgewater
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSamantha
Kuphela umgama omfutshane ukusuka kwi-pristine Bridgewater Bay, Discovery Bay kunye nemizuzu engama-20 ukusuka ePortland; iBandla likaPetros elibuyiselwe ngokumangalisayo, elakhiwa ngo-1883 laza labamba inkonzo yalo yokuqala ngomhla wesi-5 ka-Agasti ka-1884 linesitayile, umlinganiswa, ubugocigoci kunye nomtsalane kwaye ngokuqinisekileyo yindawo yokwahluka.
Ukuba ujonge indawo yokuphumla kunye nepholileyo yokurhoxa kubomi besixeko esixakekileyo, ungaze ujonge phambili. ICape Bridgewater yindawo onokuthi undwendwele kwaye uphumle.
Ubuyiselo lwangaphakathi lweBandla sisityhilelo.
Iintsalela zeBandla elidala zisabonakala; Izinyuko zamaplanga ukuya epulpitini, iindonga ezimhlophe ze-monastic, iiplanga zomgangatho owenziwe ngamaplanga aqinileyo kunye neesilingi ze-Oregon imiqadi kunye ne-kauri, kunye nezinye iipewuni ziye zasetyenziswa. Umlilo wamaplanga omileyo ubekwe embindini weyona ndawo iphambili yokuhlala kwaye ukhupha ukukhanya okushushu okufudumeza ngaphakathi kwecawa ngobo busuku bubandayo basebusika. Iimbono zasemaphandleni nazo ziyamangalisa; iinduli ezibhadulayo, iinkomo, ingca eluhlaza kunye namatyholo. Kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela.
Izilwanyana zasekhaya zamkelwe. Ipropathi ye-acre ebiyelwe ngokupheleleyo.
4.93 ·Izimvo eziyi-57
4.93 · Izimvo eziyi-57
Indawo entle neyohlukileyo yeCape Bridgewater ibonelela ngoluhlu lweyona ndawo imangalisayo kwaye iphefumlayo kule dolophu kubandakanya iBridgewater Blowholes, uhambo oluhle kakhulu lwaselunxwemeni, iHlathi eliyiPetrified, iBridgewater Lakes, ukubukela iminenga ngexesha lonyaka kwaye mhlawumbi ngakumbi, ikholoni yamatywina anokubakho. ijongwe unyaka wonke mhlawumbi ngokhenketho lwetywina okanye iingoma zokuhamba ezimangalisayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Samantha
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cape Bridgewater